Iintlanu zeDhyani Buddha: Iimpawu zoBononongo
Izikhokelo Zezulwini Ukuguquka Ngokomoya
Iintlanu zeDhyani Buddha ziimpawu zeMahyana Buddhism . Ezi ziBuddha ezidlulileyo ziboniswa ngokucamngca nge-tantric kwaye zibonakala kwi-iconography yamaBuddha.
Amahlanu amaBuddha yi-Aksobhya, Amitabha, Amoghasiddhi, i-Ratnasaṃbhava kunye neVairocana. Ngamnye umele inkalo eyahlukileyo yokuqonda okukhanyisiweyo ukunceda ekutshintsheni kokomoya.
Ngokuqhelekileyo ubugcisa baseVajrayana, bahlelwe kwi-mandala, kunye neVairocana phakathi. Amanye amaBuddha akhonjiswe kuzo zonke iindlela ezine (ngasentla, ngasentla, empuma, nangasentshonalanga).
Ngamnye iDhyani Buddha unombala othile kunye nesimboli esibonisa intsingiselo yakhe kunye nenjongo yokucamngca ngaye. I-Mudras, okanye isenzo somzimba, isetyenziswe ubugcisa beBuddhist ukuhlukanisa uBuddha omnye kwenye kunye nokubonisa ukufundisa okufanelekileyo.
UAkshobhya uBuddha: "Ongenakunyuswa"
UBuddha ongasuswayo ngu-Akshobhya uBuddha. MarenYumi / Flickr.com, iLayisensi ye-Creative Commons
U-Akshobhya wayengumonki othembisa ukuba akaze athandazele okanye athukuthele omnye. Wayengashenxiseki ngokugcina eso sifungo. Emva kokuzama ixesha elide, waba nguBuddha.
U-Akshobhya nguBuddha wasezulwini olawula iParadesi yeMpuma, uAbhirati. Abo bafeza isithembiso sika-Akshobhya bazalwa kwakhona e-Abhirati kwaye abakwazi ukubuyela kwiindawo eziphantsi zokuqonda.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iiparadesi 'eziqondakalayo ziqondwa njengengqondo yengqondo, kungekhona indawo yokuhlala.
Kwimifanekiso yobuBuddha, i-Akshobhya idla ngokuluhlaza kodwa ngezinye izikhathi ngegolide. Ngokuqhelekileyo ufaniswa ngokuchukumisa umhlaba ngesandla sakhe sokunene. Eli lidaka elichaphazela umhlaba, eliyinto esetyenziswa nguBuddha wembali xa ecela umhlaba ukuba ubungqina ngokukhanya kwakhe.
Ngesandleni sakhe sobunxele, uAkshobhya uphethe i- vajra , isimboli se- shunyata - inyani epheleleyo ukuba zonke izinto kunye nezidalwa, ezingabonakaliyo. I-Akshobhya idibaniswa ne-fifth skandha, ingqalelo .
KwiBuddhist tantra, ukukhupha i-Akshobhya ekucamngeni kunceda ukunqoba umsindo kunye nenzondo.
Amitabha Buddha: "Ukukhanya okungapheliyo"
UBuddha wokukhanya okungenamkhawulo u-Amitabha Buddha. MarenYumi / Flickr.com, iLayisensi ye-Creative Commons
Amitabha Buddha, obizwa nangokuthi uAmita okanye u-Amida Buddha, mhlawumbi owaziwayo kwiDhyani Buddha. Ngokukodwa, ukuzinikela ku-Amitabha kukuphambili kweBuddhism yeLizwe elungileyo , enye yezona zikolo ezinkulu kakhulu zaseMahayana Buddhism e-Asia.
Ngexesha elide elidlulileyo, u-Amitabha wayeyinkosi elawula ubukumkani bakhe ukuba ibe ngumbethi. Ebizwa ngokuba nguDharmakara Bodhisattva, umonki wayesebenza ngenkuthalo ngeeons ezintlanu waza waqaphela ukukhanya waza waba ngumBuddha.
I-Amitabha Buddha ibusa phezu kweSuvvati (iParadesi yeNtshona) ebizwa ngokuba yiLizwe elinyulu. Abo baphinde bazalwe kwi-Pure Experiences Land ukuvuyela ukuva i-Amitabha bafundisa i-dharma de kube sele bekulungele ukungena eNirvana.
Amitabha ifanekisela inceba nobulumko. Udibene ne-third skandha, leyo yokucinga . Ukucamngca nge-Tantric kwi-Amitabha yinqaba yokufuna umnqweno. Ngamanye amaxesha kuboniswa phakathi kwe-bodhisattvas Avalokiteshvara kunye neMahasthamaprapta.
Kwimifanekiso yeBuddhist, izandla zika-Amitabha zisoloko zicamngca kwi-mudra: iminwe ingathinteki kwaye iphotshwe ngenyameko phezu kwempuphu eneentende ezijongene phezulu. Umbala wakhe obomvu ubonisa uthando kunye novelwano kunye nesimboli yi-lotus, emele ubumnene nokuhlanzeka.
U-Amoghasiddhi Buddha: "uMnqobi uSomandla"
UBuddha Ofezekisa ngokungafezekanga injongo yakhe, uBuddha wase-Amoghasiddhi. MarenYumi / Flickr.com, iLayisensi ye-Creative Commons
Kwi " Bardo Thodol " - " Incwadi yaseTibet of Dead " - U-Amoghasiddhi Buddha ubonakala emele ukufezekiswa kwazo zonke izenzo. Igama lakhe lithetha 'Ukuphumelela okungenakwenzekayo' kunye nomqabane wakhe nguTara owaziwayo ohlaza, 'kuMhlanguli oMkhulu.'
U-Amoghasiddhi uBuddha ulawula eMntla kwaye unxulumene ne-fourth skandha , ukuzithandela okanye ukwakheka kwengqondo. Oku kungaphinda kuguqulelwe njengemiphumo, enxulumene kakhulu nento. Ukucamngca ngo-Amoghasiddhi uBuddha unqabisa umona nomona, amabini amanyathelo athathekayo.
I-Amoghasiddhi iboniswa rhoqo kwi-iconography yamaBuddha njengoko ikhanya ngokukhanya okuluhlaza, oko kukukhanya kokufezekisa ubulumko nokukhuthaza uxolo. Isandla sakhe isenzo sisidaka sokwesaba: isandla sakhe sokunene phambi kwesifuba nesundu esibheke ngaphandle njengokuthi 'yima.'
Uphethe i-vajra ewela, ebizwa ngokuba yi- dorje okanye iindudumo. Oku kubonisa ukufezekiswa nokuzaliseka kuzo zonke izikhokelo.
I-Ratnasambhava Buddha: "I-Jewel-Born One"
I-Born Born Jewel Buddha. MarenYumi / Flickr.com, iLayisensi ye-Creative Commons
I-Ratnasambhava Buddha ibonisa ubutyebi. Igama lakhe liguqulela kwi-"Origin of Jewel" okanye "I-Jewel-Born One". NgamaBuddha, iItrama ezintathu ziBuddha , iDharma, kunye ne-Sangha kunye ne-Ratnasambhava idlalwa ngokuba yiBuddha.
Ulawula eMzantsi kwaye unxulumene nesibini ye-skandha, inzwa. Ukucamngca kwi-Ratnasambhava uBuddha unqabisa ukuqhayisa nokuhaha, egxininisa ekulinganeni.
U-Ratnasambhava uBuddha unombala ophuzi ofanekisela umhlaba nokuvelisa kwi-icon yobuBuddha. Uhlala ephethe i-jewel yofezekiso.
Ubeka izandla zakhe kwi-mudra enomnqweno-ozalisekileyo: isandla sakhe sokunene sijongene phantsi kunye nesundu esingaphandle nangasekhohlo kwi-mudra yokucamngca. Oku kufanekisela ukupha.
UVairocana uBuddha: "Uhlobo lokukhanya"
Lowo ofana neLanga uBuddha waseVairocana. MarenYumi / Flickr.com, iLayisensi ye-Creative Commons
I-Vairocana uBuddha ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yiBuddha okanye uBurdha oPhezulu. Kucingelwa ukuba yindlela yokuziphatha ngayo yonke i-Dhyani Buddha; nazo zonke izinto nakuyo yonke indawo, zikhoyo kwaye ziyazi zonke.
Umele ubulumko bokuba shunyata , okanye ukungabi nalutho. I-Vairocana ibhekwa njengomntu we- dharmakaya - yonke into, engabonakaliyo, engenampawu kunye nokuhlula.
Udibene ne-first skandha , ifomu. Ukucamngca ngeVairocana kukutshintshisa ukungazi nokukhohlisa, okukhokelela kubulumko.
Xa amaDhyani eBuddha aboniswa kunye kunye ne-mandala, iVairocana iphakathi.
I-Vairocana imhlophe, imele yonke imibala yokukhanya kunye nayo yonke iBuddha. Isimboli sakhe isondo leDharma , elineyona ndlela eyona siseko, ibonisa ukufundwa kwe-dharma, ukuqhuba ngokucamngca nokuziphatha ngokuziphatha.
Isandla sakhe sandla siyaziwa ngokuba yiDharmachakra mudra kwaye ihlala igcinwe kwi-iconography ye-Vairocana okanye iBuddha yembali, uShakyamuni . I-mudra imele ukujika kwevili kwaye ibeka izandla ukwenzela ukuba izithupha kunye neenkomfa zenkcazo zithinte kwiingcebiso zokwenza ivili.
Iindaba Eziziwayo Zezilwanyana Ukunceda Abantu Ngeendlela Ezimangalisayo
Iingingqi zeUnited States
Indlela yokwahlula iString Delimited Into yoLuhlu lweSonga
I-Stephens College ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
Iimpahla zeNonemonic eziHlangeneyo zokuNceda Khumbulani Izinto zeKhaya
I-Spider-Man yaphela njani kwi-Universe Cinematic Universe?